Xukuumada Soomaliya Oo Ku Gacan Sayrtay Joojinta Heshiisyada Shidaalka Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Xukuumada Soomaliya Oo Ku Gacan Sayrtay Joojinta Heshiisyada Shidaalka Soomaaliya
Xukuumada Soomaliya Oo Ku Gacan Sayrtay Joojinta Heshiisyada Shidaalka Soomaaliya
Dowladda Federalka Somaliya ayaa si cad ugu gacan seyrtay soo jeedin ka timid Qaramada Midoobay, taasi oo ku saabsan in la joojiyo heshiisyada ku saabsan Shidaalka dalka Somaliya.
5 Bishii September ee sanadkan Dowladda Somaliya waxa ay heshiis cusub oo Shidaal baaris ah la gashay Shirkad lagu magacaabo Spectrum ASA. Heshiiskaas oo lagu sahminayo dhul badeed baaxaddiisu dhan tahay 28,000 km oo lagu Sameynayo sahanka noociisu yahay 2D (2D seismic survey).
Wasiirka Maaliyada Xukuumadda Somaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa sheegay warbixin cusub oo ay soo saari rabto Kooxda Dabagalka Hubka ee Qaramada Midoobay Bartamaha Bishan ay ku celin doonto talo soo jeedin ay sameysay 2013-kii, taasi oo ku saabsan in Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu mamnuucayo heshiisyada ku saabsan Shidaal Baarista Somaliya.
Wasiirka Maaliyada ayaa sheegay arinta ku saabsan Shidaal Baarista Somaliya inay tahay arin u taal Qaran Madaxbanaan.
“Wa arrin qaran madax-bannaan u taal,” Ayuu yiri Wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan oo magaalada Nairobi kula hadlayay Warfidiyeenno. “Ma soo dhowayn doonno go’aan gabi ahaanba dib loogu dhigayo howsha socoto.”
Shirkada Som Oil % Gas oo fadhigeeda uu yahay Magaalada London ee dalka UK oo horay heshiis ula gashay Dowladda Federalka Somaliya ayaa waxaa ku socdo baaris ku aadan eedeymo loo soo jeediyay, taasioo ah musuq maasuq ay ku kacday.
Heshiiska Dowladda Somaliya ay la gashay Shirkada cusub Spectrum wuxuu dhameystirayaa xogtii laga aruuriyey 2014, dhulbadeed baaxaddiisu dhan tahay 20,000km. Sahankaan wuxuu suurtagelinayaa in si qoto dheer ah loo ogaado baaxadda shidaal ee badda Soomaaliya oo u dhow wadamada shidaalka laga helay ee Geeska Afrika.